Inkinga yokudakwa ngokweqile akuyona iminyaka eyishumi yokukhathazeka kwabantu abaningi. Kusukela kulokhu kugula isiguli nesimo sakhe sihlupheka. Ngokusho odokotela abaningi, ukwethembela kotshwala yisifo esingelapheki. Abantu baze bathi ngisho namabhodla angaphambilini. Naphezu kwalokhu, kunezinye izindlela zokwelapha lesi sifo. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu futhi ezivame ukukopisha i-Dovzhenko. Le ndlela yasungulwa yinkanethi yezinambuzane. Igama lakhe nguDovzhenko Alexander Romanovich. Wayenguye owokuqala ukufika negama elithi "coding". Isisekelo sishaqeka noma ukwelapha ukucindezeleka. Ucwaningo lwezokwelapha luqinisekisile ukusebenza kwalendlela. Siyabonga, ukubhaliswa kwekhodi kuye kwazuza udumo emhlabeni wonke. Izinkulungwane zeziguli zaphawula umphumela omuhle, ohlinzeka ukwelashwa ngokwendlela yeDevvhenko.
Ngokufushane mayelana nendlela
Indlela yokwenza ikhodi isekelwe ekusetshenzisweni kwemikhuba ethile yesifo sengqondo.
2. Imikhuba yezokwelapha.
3. Ukwelashwa okungahambi kahle.
4. Uhlelo lwe-Neuro-linguistic.
Ukwenza ikhodi nge-Dovzhenko akusizi nje ukuphuza utshwala kuphela, kodwa futhi nokubhema, ukulutha nokugembula. Udokotela akasebenzisi imithi phakathi neseshini futhi akasebenzise izinqubo ezibudlova. Umphumela ufezwa ngosizo lwegama. Umuntu obhekene nethonya le-hypnosis unikezwa isilungiselelo esithile sesikhathi esithile sokunganaki. Ngesikhathi sonke esilungiselelwe, isiguli sigxiliwe ngokulangazelela utshwala futhi kuthuthukiswa umuzwa wokuzonda. Ikhodi ngokulandela indlela yeDovzhenko yenziwa lapho umuntu othembekile ehlala ephapheme futhi engafuni ukucwiliswa kwakhe ekujuleni kwe-hypnosis. Ukuphumelela kwalendlela kutholakala cishe kuzo zonke iziguli.
Phakathi kokufaneleka kwalendlela kuyisisindo sayo, ukusebenza kahle kanye nomnotho. Ukwamukelwa kwale ndlela yokwelashwa kwakuphakathi kwabaningi bama-narcologists nama-psychotherapists.
Ukwenza ikhodi nge-Dovzhenko kwenzeka emtholampilo. Udokotela, ukugcoba isiguli esimweni esingenalutho, okusho ukufeza inqubo ngamehlo avulekile, angayinaki utshwala. Ukwenqatshwa kutholakala ngokunikeza izibonelo ezithile zokulimala kotshwala, umthelela omubi empilweni. Konke lokhu kuhambisana nombala othile womzwelo. Kancane kancane isiguli sifinyelela esiphethweni sokuthi udinga ukuphulukiswa.
Isikhathi sokukhokha sisekelwe ekuhlanganisweni kwezinhlelo ezimbili zokuzijabulisa:
1. Kuhlelo lokuqiniswa okuhle, okungukuthi, ukuzigcina njengomuntu ngamunye.
2. Esimweni sokuphendula okungokomzwelo, okungukuthi, isimo sokuzimela.
Lezi zici eziyinhloko zivikela ngokumelene nezifiso zotshwala. Ukusebenzisa le ndlela, udokotela kufanele enze isiguli sikholwe ngokwabo. Kubangela isifiso sokuzinikela emsebenzini.
Uma usebenzisa le ndlela, imvelaphi engokomzwelo eyakhiwe ekusebenziseni amasu okukhuthaza ukuphumula komzimba kunesidingo esikhulu. Kuqondene nomzwelo wezinyawo, ukubonakala kwemfudumalo ezandleni nasezinyaweni, ukuqeda ukwesaba nezinye izimpawu eziphazamisayo.
Inhloso eyinhloko yokwenza ikhodi ukudala ukufakwa okuqinile. Kuhloswe ukunyamalala kokulangazelela utshwala. Lokhu kuhambisana nokuvuswa kwezici ezinhle zomuntu wesiguli. Kukhona ukushintshwa kwamanani.
Inkambo, eyenzelwe ukwelashwa okuphelele, kwenzeka ezinyathelweni ezintathu.
Isinyathelo sokuqala kuhilela ukulungiselela isiguli. Iqukethe ukuqhuba ingxoxo kadokotela nokuthola ukuthi isiguli silungele ukuphulukiswa. Umgomo kuphela ochazwe ngokucacile nesifiso sokushintsha kungavimbela isifiso esiyingozi sesiguli futhi kubangele ukunyamalala kokuthembela.
Isigaba sesibili sihambisane nokufakwa komuntu esimweni somuntu ohamba phambili. Ngalesi sikhathi udokotela uzohlela uhlelo isiguli isikhathi lapho isiguli singeke sithathe utshwala.
Isigaba sesithathu yisiphakamiso. Isiguli ngasinye ukhetho lomuntu ngamunye lwethonya lwenziwa.
Izici zokuqeda ukulutha umlutha
Ikhodi ye-Dovzhenko, indlela esetshenziselwa ngempumelelo emhlabeni jikelele, isici esisodwa esibalulekile. Isiguli akufanele siphuze utshwala izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwenqubo. Uma lokhu kuhluleka, isiguli sifakwa esibhedlela. Lapho uqondiswa abasebenzi.
Ukwelashwa ngale ndlela akunawo umphumela omubi kumuntu. Ngokuphambene nalokho, ukujwayelekile kwemisebenzi yengqondo yesimiso sezinzwa nesimo sengqondo sesiguli kuphawulwe. Futhi umzimba uqiniswa kakhulu. Indlela kuphela izinzuzo isiguli.
Inkathi yokwenza ikhodi
Unyaka owodwa yisikhathi esifushane lapho kuvinjelwe ukuvinjelwa kotshwala. Indlela ye-Dovzhenko iqala, uma isiguli ngokwakhe sifuna, ithuba lokunweba isikhathi sokubhala noma ukuphinda inqubo.
Ukwelashwa kukhokhwa. Kodwa naphezu kwalokhu, imali esetshenzisiwe ikhokha ngenyanga ezayo. Phela, isiguli siphelelwa ukuphuza utshwala.
Kunezinamba eziningi zokuphikisana ngaphambi kokufaka ikhodi yokubhala.
1. I-Hangover syndrome.
2. Isimo sokudakwa.
4. Izifo ezithinta amagciwane.
5. I-delusional ithi.
6. Izifo zengqondo.
7. Muva nje wahlaselwa isifo senhliziyo.
8. Ezinye izifo ezingapheliyo.
9. Inkinga ye-hypertensive.
10. Ukuhluleka kwenhliziyo ukuhlukumeza.
11. Ukudayiswa kwabantu abangaphansi kweminyaka engamashumi amabili nambili akuvumelekile.
Yini enye okudingeka uyenze mayelana nenqubo yokuqeda ukuxhomeka kukaDovzhenko? Le ndlela iqala ukuhlolwa okuphelele ngaphambi kokusebenzisa ikhodi. Kudingeka ukudlulisa ukuhlolwa okujwayelekile komchamo, igazi, ukwenza i-electrocardiogram.
Ukuqinisekisa ukufaneleka kokukhetha indlela yokwenza ikhodi, isiguli ngasinye sinikezwa ukuhlolwa kukadokotela ngendlela yengxoxo. Ngesikhathi sokubonisana, lochwepheshe usho ukuphikisana okungenzeka ukuthi ukwelashwa ngale ndlela. Le ngxoxo isiza udokotela ukuba azi kahle isiguli, afunde imininingwane yenkambo yesifo, futhi ahlaziye izici zesiguli esithile.
Uma kuvela ukuthi umuntu akanakulinganisela ngokwengqondo, khona-ke angabhalwa ukwelashwa okulungiselelwe ngenhloso yokuletha umzimba ngendlela evamile.
Ngemuva kwenkathi yokubhala, ukutakula nokubuyiswa kwenzeka ngokushesha, kungakhathaliseki ukuthi isigaba sesifo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukuphulukiswa kwezifo kungabangela imiphumela emibi. Yilokho, lezo zinkinga "ezixazululwa" ngosizo lophuza utshwala, kumele zihlangane ngendlela ehlukile. Isiguli asilungele njalo imiphumela enjalo. Lokhu kungaholela ekwakhiweni kwe-neurosis, ukucindezeleka noma ukuphazamiseka. Ngenxa yalokho, ukubuyela emuva kungase kwenzeke.
Uma ukuqopha kwenziwa ngudokotela ongaqondi imithetho yokusebenza kwengqondo yomuntu, lokhu kungabangela ukuvela kokungqubuzana kokuqwashisa nokunganaki. Phela, inqubo ngokwayo yenziwa ngokuthinta ukungazi lutho. Le mpikiswano iholela ekushintsheni okungaqondakali emuntwini wobuntu. Khona-ke kuyadingeka ukwenza inqubo yokucubungula.
Le nqubo iphinde ihlolwe nguDovzhenko. Le ndlela ihlanganisa nokucubungula. Kungenziwa kokubili emtholampilo nasemoyeni yocingo. Uma ungenzi ukucubungula, umzimba ungasabela ngokujulile kuwo. Imiphumela ingabangela ukuhlaselwa yinhliziyo, ukushaywa noma isifo esibulalayo.
Indlela ye-Dovzhenko - impendulo
Ngokuvamile zonke iziguli ezisebenzise le ndlela, zenze umphumela omuhle. Baye baphikisana nesikhathi esisodwa sokubhala ikhodi ngayinye yazo. Abanye baze banyusa isikhathi sokuziqeda eminyakeni engamashumi amahlanu.
Indlela ye-Dovzhenko, okubuyekezwa kwayo eningi umsindo oqondile, ikhombisa ukungabi khona kwanoma yisiphi isifiso sokuphuza utshwala isikhathi esithile. Ukungafani kuvele ngokwesilinganiso esimweni esisodwa ngaphandle kwamashumi amahlanu. Isibonelo, isiguli sinekhodi iminyaka emithathu. Emva kwalokho waqala ukuphuza utshwala emva kwezinyanga ezimbalwa.
Imindeni eminingi yasizwa ngokufaka ikhodi ngokusebenzisa indlela ye-Dovzhenko. Ubufakazi bamakhosikazi nomama abathokozelayo benza umuntu akholelwe ngale ndlela yokuqeda lesi sifo.
Kubalulekile ukukhetha isazi esifanele kanye nenhlangano eqhuba ikhodi ukuze kungabi nemiphumela emibi. Ummeleli wesikhungo kufanele abe nesifundo esihle sengqondo ngendlela, ezoqinisekisa ukuthi ukuphepha.
Kunamafutha ama-bearish, izakhiwo zezokwelapha, izinkomba nezindlela zokusebenzisa ziyasiza
Isimiso sokumzimba umzimba. Ukuzikhandla: izinhlobo, izimiso, izindlela kanye nezindlela
Kagesi nokuxhumana izinhlayiya